Orthodontic Brackets Factory | China Orthodontic Brackets mpanamboatra, mpamatsy
Dental Orthodontic Ortho self ligating Metal Bracket MBT system Orthodontic Brackets Self-ligate slot 22
Fehikibo fametahana tena manokana
Size: Roth 22 345
Roth 22 345 miaraka amin'ny farango
MBT 22 345 miaraka amin'ny farango
Fonosana Ceramic Orthodontic bracket fonosana estetika fonosana serth ortodontika fonosana
Fametahana ceramic estetika Toetoetra:
Miaraka amin'ny rafitry ny teknolojia CIM (Ceramic Micro Injection Molding) farany ity, mora afovoany izay manamora ny fametrahana ny nify.
Ny slot dia voadidy diamondra, ka manome antoka ny marina, ny marina na ny fototry ny halalin'ny slot aza.
Antsoina hoe fononteny tsy hita izy io satria miloko akaikin'ny nify voajanahary ary tsy mora tohina rehefa ampiasaina am-bava.
Ity fonosana Ceramic ity dia tsy misy akora metaly azo ampiharina amin'ireo marary tsy mahazaka vy.
fonon-kiran'ny ligam-baravarana nify tena avo lenta
Fitaovana fametahana keramika orthodontika:
1. T- miendrika spherical traction hook, ny fingotra tarika dia tsy mora lavo.
2. Mora ny manidy hidina lohataona nikela-Titanium lohataona namboarina.
3. Afovoany afovoany mety amin'ny fanitsiana vaovao sy lavitra
3. Fahatsapana ahazoana aina: ny sisiny sy ny elatry ny fatotra rehetra dia natao miaraka amina lamina miendrika arc and Smooth, izay mampiadana ny marary.
4. Adhesion tsara indrindra: harato vaovao hahatratra ny tanjaky ny fononteny tsara indrindra.
6. mahatohitra afo.
7. Tsy mora ny vaky.
8. Vidiny mety, fonosana tsara, ho an'ny tsenan'ny nify.
fehezan-dalàna miady-nify nify braces
Fonosam-batana vita amin'ny seramika vita amin'ny krytika ortodontika ho an'ny fampiasana klinika mpitsabo nify
fonosana seramika orthodontic nify Toetoetra:
1. Fahamarinana avo lenta: ny fononteny keramika dia ampiasain'ny teknolojia CIM hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.
2. Hery matanjaka: ny fononteny vita amin'ny keramika dia vita amin'ny akora vita amin'ny seramika izay manome tanjaka maharitra maharitra.
5. Teboka ID nalaina code azo esorina, ho an'ny selction mora mora.
Fonosana vita amin'ny kiran-taolana ortodontika avo lenta
fonosana vita amin'ny seranana orthodontic bracket
Topy maso amin'ny antsipiriany haingana Toerana niaviany: Sina, Sina Laharana maodely: fonosana seramika nify loharanom-pahefana: Warranty manual: 1 taona serivisy aorian'ny fivarotana: Fanohanana ara-teknika an-tserasera Fitaovana: Fiainana seramika: 1taona ...
fonosana nify orthodontic voamarika ceramic self ligation fonosana fonosana orthodontic fitaovana seramika miaraka amina vy-ligating fononteny
Overview Quick Details Toerana niaviany: Sina, Sina Isa nomerika: fonosana seramika vita amin'ny kiran-nify Loharanon-kery: Warranty amin'ny tanana: serivisy aorian'ny fivarotana 1 taona: Fanohanana ara-teknika an-tserasera Fitaovana: vy, fiainana seramika seramika: ...
fivarotana mafana fonosana orthodontic nify fonosana seramika mitambatra amin'ny vy amin'ny vy
fonosana seramika orthodontika 022 famonosana tena-boribory kely vita amin'ny nify Mini bracket avo lenta
Overview Quick Details Toerana niaviany: Sina, Sina Isa nomerika: fonosana seramika vita amin'ny kiran-nify Loharanon-kery: Warranty manual: 1 taona serivisy aorian'ny fivarotana: Fanohanana ara-teknika an-tserasera Fitaovana: Fiainana seramika: ...
mpitsabo nify orthodontic 3D ceramic self ligating bracket orthodontic ceramic self ligation
Korea fonosana safira ortodontika nify fonosana seramika fonosana vita amin'ny nify safira
Overview Quick Details Toerana niandohany: Korea, Korea Nomera modely: fonosana safira nify Loharanon-kery: Warranty amin'ny tanana: 1 taona serivisy aorian'ny fivarotana: Fanohanana ara-teknika an-tserasera Fitaovana: monocrystal Fiainana talata: 1taona ...